हिमाल खबरपत्रिका | ‘हिमाली क्षेत्रका प्रतियोगिता नै जोखिमपूर्ण छन्’
‘हिमाली क्षेत्रका प्रतियोगिता नै जोखिमपूर्ण छन्’
एभरेष्ट म्याराथनको उपाधि जित्नु भो, कस्तो लागिरहेछ ?
म्याराथनमा चाहिं कसरी जोडिनु भो ?
म सगरमाथा आधारशिविरमा भरियाका रुपमा काम गर्छु । उकालो–ओरालो छिटो हिंड्न सक्ने भएकाले स्थानीयस्तरमा आयोजना हुने दौड प्रतियोगितामा भाग लिन्थें । ती प्रतियोगिता जितेपछि जिल्ला बाहिरका प्रतियोगितामा पनि भाग लिन थालें । त्यसपछि क्रमशः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामै जोडिन पुगें ।